အစားအသောက် ၆ ပွင့် - ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ၊ အစားအသောက်မီနူးများနှင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ ရလဒ်များ | တရားဝင် site KETO Complete
အစားအသောက် ၆ ပွင့် - မီနူးနှင့်သုံးသပ်ချက်များ
အစားအသောက် ၆ ပွင့်
26 မတ်လ 2022
6 Petal Slimming Diet ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ အာဟာရပညာရှင် Anna Johansson မှ တီထွင်ခဲ့သည်။ဖြစ်နိုင်ချေများသောအားဖြင့်၊ အပိုပေါင်များကိုဖယ်ရှားခြင်း၏ဤရွေးချယ်မှုသည်အစားအစာပမာဏတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ရန်မကြိုက်သောလူတိုင်းနှင့်အလိုရှိသောရလဒ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိလိုသူတိုင်းအတွက်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ပထမတစ်ချက်တွင် Anna Johansson ၏ ပွင့်ချပ် ၆ ပွင့်စာသည် အလွန်ရိုးရှင်းပုံရသည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် ခြောက်ရက်အတွင်း အုပ်စုတစ်စု၏ ထုတ်ကုန်များကို စားသုံးခြင်း၏နိယာမအပေါ် အခြေခံထားသည်။ဥပမာ- တစ်နေ့မှာ အသီးအရွက်တွေပဲစားတယ်၊ နောက်တစ်ရက်က အသားတွေပဲ စားနိုင်တယ်။သို့ရာတွင်၊ အချို့သောထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း၏အစီအစဥ်သည် adipose တစ်ရှူးများပျက်စီးခြင်း၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှပျက်စီးယိုယွင်းနေသောထုတ်ကုန်များကိုဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ထို့ကြောင့်၊ အဆီသိုလှောင်မှုလျှော့ချခြင်းအပေါ် အမြင့်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် စနစ်၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တိကျစွာမူတည်ပါသည်။
Diet နိယာမ6ပွင့်ချပ်
ပွင့်ချပ် ၆ ပွင့်တွင် အရိုးရှင်းဆုံး မီနူး ပါရှိသည်- သင် အစားအစာ အုပ်စုခြောက်ခုကိုသာ စားရန် လိုအပ်သည်။၎င်းတို့သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲများ၊ စီရီရယ်များ၊ ငါးများ၊ ကြက်သား၊ အသီးအနှံများဖြစ်သည်။ဆား၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို အစားအသောက်များတွင် ထည့်နိုင်သည်။ပရိုတိန်းဖြင့်၊ အဆီများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြိုခွဲလာသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ကျစေသည်။အချို့သောရက်များတွင် အစိမ်းလိုက်နှင့် ဖုတ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပါဝင်သော်လည်း အဆီအနှစ်မပါဘဲ ၎င်း၏ သန့်ရှင်းသောပုံစံဖြင့် စားသုံးရန် ဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်တစ်နေ့တာတွင် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ကြက်သားကိုလည်း စားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ အစာစားခြင်းဖြင့် ဆာလောင်မှုကို ရိုးရှင်းစွာ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။တိုဟူးနေ့တွင်၊ မီနူးတွင် အဆီနည်းသောနို့အနည်းငယ်ကို ထည့်သွင်းခွင့်ပြုထားသည်။ရေကို ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ သောက်သုံးသင့်သည် - များများလေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ဆဌမနေ့တွင် သင်သည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ညှစ်ထားသော ဖျော်ရည်များကို သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း ကယ်လိုရီများသော အသီးအနှံများ (ဤအရာများတွင် စပျစ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဖရဲသီးများ အပါအဝင်)။
ကန့်သတ်ချက်မရှိသလောက် နေ့ရက်တိုင်းတွင် သကြားမပါဘဲ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ဖက်ရည်ကို သောက်ခွင့်ပြုထားသည်။အမျိုးမျိုးသော သို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဝင်အပင် လက်ဖက်ရည်အစုံကိုပင် ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်။Cleansing Tea (သို့) အရသာပိုကောင်းမယ့် လက်ဖက်ရည်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။အဓိက ကတော့ သူ့မှာ အတုအယောင် အရသာတွေ မရှိဘူး ဆိုတာ သေချာအောင်ပါ။
အာဟာရဗေဒပညာရှင်များနှင့် အထွေထွေအသုံးပြုသူများကြားတွင် Johansson ၏ အစားအသောက်ကို "6 petals" ဟုခေါ်သည်။သူမသည် နေ့စဉ် မီနူးတွင် ရေးထိုးထားသည့် ပန်းခြောက်ပွင့်ပုံသဏ္ဍာန်၏ အမြင်အာရုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော သူမ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းအတွက် ၎င်းကို အကြွေးတင်နေပါသည်။ထိုကဲ့သို့သောပုံကို ရေခဲသေတ္တာတွင် ချိတ်ဆွဲထားပြီး နေ့ရက်တိုင်း၏အဆုံးတွင် ပန်းပွင့်များထွက်လာသည်။ဤစနစ်သည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော တွန်းအားပေးမှုကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းလိုသောဆန္ဒ၊ သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်နီးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာစေသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမခြင်းသည်လည်း တိုးပွားလာပြီး ပြိုကွဲနိုင်ခြေကို လက်တွေ့ကျကျ ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
ပွင့်လွှာခြောက်ပွင့်အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဟာရပညာရှင်များက သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာပါက သုံးသပ်ချက်သည် အပြုသဘောဆောင်မည်မှာ သေချာပါသည်။ပထမဦးစွာ၊ ခေါက်ဆွဲမုန့်မှလွဲ၍ သကြား၊ ချောကလက်၊ ကိုကိုး၊ ထောပတ်၊ ဝက်အူချောင်းများ၊ ဆေးလိပ်သောက်ထားသော အသားများ၊ စည်သွပ်ဘူးများကို အစားအသောက်မှ ဖယ်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် တာရှည်ခံပစ္စည်းများမပါဘဲ လတ်ဆတ်ရမည်။
ရေ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဖျော်ရည်များကို အစားအစာများကြားတွင် သောက်သုံးနိုင်ပြီး အစာစားချိန်အတွင်း အစားအစာများကို "ဆေးကြော" ရန် အကြံပြုထားခြင်း မရှိဘဲ အစာချေဖျက်မှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။အပိုင်းများသည် သေးငယ်သော်လည်း တစ်နေ့လျှင် ခြောက်ကြိမ်အထိ မကြာခဏစားနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စာဖတ်သူတိုင်း မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် - သင်တစ်နေ့တာမှာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို စားနိုင်တာကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်မှာလား။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၊ ဖြစ်နိုင်ချေများသောအားဖြင့်၊ သင်သည် များသောအားဖြင့် အရသာရှိသော တစ်ခုခုကို စားချင်လိမ့်မည်။ဒါပေမယ့် တခြားအစားအစာတွေလိုပဲ ဗိုက်ဆာတာကို ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ထင်ရှားစွာတည်ဆောက်ထားသောကံကောင်းသူများပြောသည့်အတိုင်း၊ နည်းပညာ၏ထိရောက်မှုကိုအလွန်လျင်မြန်စွာခံစားရသည်။
အစားအသောက် ခြောက်ပွင့်လွှာ- မိုနိုအစားအသောက်များ ၏ အစီအစဥ်
ပထမနေ့ - ငါးဟင်း. ဤနေ့တွင် ပြုတ်၊ ဖုတ်ထားသော သို့မဟုတ် ရေနွေးငွေ့ပုံစံဖြင့် မည်သည့်အမျိုးအမျိုးမဆို ငါးကို စားရန် အကြံပြုထားသည်။ကြော်လို့မရဘူး။ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဆားအနည်းငယ်နှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထည့်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ငါးဟင်းရည် စားသုံးခြင်းသည်လည်း အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
ဒုတိယနေ့ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်. ယနေ့ခေတ်အစားအသောက်များတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသာ ဖြစ်သင့်သည်။၎င်းတို့ကို အစိမ်းလိုက်၊ ပြုတ်ထားသောသုပ်၊ ပြုတ်စားနိုင်သည်။အသင့်စား အစားအစာများတွင် အပျော့စား ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ထည့်ခွင့်ပြုထားသည်။သဘာဝအသီးအရွက်ဖျော်ရည်များကိုလည်း ပြင်ဆင်ပြီး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။သို့သော် စည်သွတ်ချဉ်နှင့် အချဉ်ဖောက်ထားသော အစားအစာများကို ချန်လှပ်ထားသင့်သည်။
တတိယနေ့ - ကြက်သား. သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ သီးသန့်ကြက်သားအသားကို ပိုစားသင့်တယ်။ဒီလိုလုပ်ဖို့ အသားလွှာကို ခွဲပြီး ပြုတ်၊ ပြုတ် ဒါမှမဟုတ် ဖုတ်ပါ။ကြော်ထားသော အစားအစာများကို ရှောင်ရန် လိုအပ်သေးသည်။ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် ဆားအနည်းငယ်ကို အသားထဲသို့ ထည့်နိုင်သည်။ကြက်ပြုတ်ရည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ကောင်းပါတယ်။
စတုတ္ထနေ့ - ကောက်နှံများ. ယနေ့ခေတ်အတွက်၊ စီရီရယ်အမျိုးမျိုးကို အခြေခံထားသော ဟင်းလျာများကို အကြံပြုထားသည်။ကောက်နှံ၊ ဖွဲနုပေါင်မုန့်၊ ပေါင်မုန့် အမျိုးမျိုးတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပဉ္စမနေ့ - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲမီနူး. ပဉ္စမနေ့တွင်၊ အဆီရာခိုင်နှုန်းနည်းသော နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ခွင့်ပြုသည်။နို့၊ အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့၊ kefir၊ ဒိန်ချဉ်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ခဲဖြစ်နိုင်သည်။အစားအစာ၏အဆုံးတွင်၊ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများ၏အကြောင်းအရာနှင့်မျှတသောဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်ပုံမှန်စိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်နှစ်ရပ်စလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဆဌမနေ့ - အသီးအနှံ. ဤနေ့သည် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မီနူးကို အချိုမပါသောအသီးအနှံများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသင့်သည်။၎င်းတို့ကို အသုပ်များ၊ သန့်စင်သော နှင့် ဖျော်ရည်များ ပုံစံဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် မီနူးချက်ပြုတ်နည်းများကို ပြုစုသောအခါတွင် အလွန်တီထွင်ဆန်းသစ်ကြပြီး မကြာခဏ ကန့်သတ်ချက်များကို အလွန်ရှင်းလင်းစွာ လိုက်နာလေ့မရှိကြသောကြောင့် အစားအသောက်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ လူတိုင်းစားနည်းကို အကြံဉာဏ်ရနိုင်စေရန်အတွက် တစ်နေ့တာအတွက် အသေးစိတ်အစားအစာ ဥပမာတစ်ခုကို ပေးလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
8: 00 - ပြုတ်ထားသော ပင်လယ်ဘေ့လွှာ (cod, hake, pike perch) ကို သုံးဆောင်နိုင်သည် ။
11: 00 - အဆီနည်းငါး, ဇီယာစေ့နှင့်နံနံပင်နှင့်အတူမီးဖို၌ဖုတ်;
14: 00 - ငါးဟင်းချို (သင်ငါးသို့ပုစွန်နှင့် rapana အသားထည့်နိုင်သည်) ဟင်းသီးဟင်းရွက်မပါဘဲ;
17: 00 - နှစ်ထပ်ဘွိုင်လာတွင်ချက်ပြုတ်ထားသောငါး;
20: 00 - ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်အတူပြုတ် pike perch ။
အစားအစာများအကြား - သကြားမပါသောအစိမ်း၊ အနက်ရောင်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည်။
8: 00 - ယေရုရှလင် artichoke, turnip သို့မဟုတ်မုန်လာဥနီ, ခြစ်;
11: 00 - ဆီမပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ် (သို့) သန့်စင်သော (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ရည်);
14: 00 - ပြုတ်အာလူးနှင့်အတူစွပ်ပြုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်;
17: 00 - နှစ်ထပ်ဘွိုင်လာတွင်ချက်ပြုတ် beets, မုန်လာဥနီ;
20: 00 - ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်း။
အစားအစာများအကြား - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်များ၊ အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်နှင့်အနက်ရောင်။
8: 00 - ပြုတ်ကြက်သားလွှာ;
11: 00 - နံ့သာမျိုးဖြင့်သတ္တုပါးဖြင့်ဖုတ်သောကြက်သားရင်သား;
14: 00 - အမြစ်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူအဖြူအသားစွပ်ပြုတ်;
17: 00 - ကင် (သို့မဟုတ်ကင်);
20: 00 - ကြက်သားလွှာပြုတ်။
အစားအစာများအကြား - ကြက်ပြုတ်ရည်၊ လက်ဖက်ရည်။
8: 00 - စီရီရယ်မှရေတွင်ပြုတ်ထားသောယာဂု;
11: 00 - ရေတွင်ပြုတ်ထားသော buckwheat ဂျုံယာဂု (နံ့သာမျိုးနှင့်အတူ);
14: 00 - ဆန်ယာဂု (သို့) ဆန် (ရေပေါ်);
17: 00 - အစေ့များထည့်ထားသောရေပေါ်တွင် oatmeal (50 ဂရမ်ထက်မပို) ။
20: 00 - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် buckwheat ဂျုံယာဂု။
8: 00 - အဆီနည်းအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ + ဒိန်ချဉ် (သဘာဝ);
11: 00 - နို့၏ထပ်ပေါင်းနှင့်အတူအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ (1% အဆီ) ။
14: 00 - additives မပါဘဲအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ (5% အဆီ)
17: 00 - kefir နှင့်အတူအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ;
20: 00 - additives မပါဘဲ အဆီနည်းသော အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ။
အစားအစာများကြားတွင် နို့ ၁ ဖန်ခွက်၊ လက်ဖက်ရည်ကို ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ သောက်နိုင်သည်။
8: 00 - အနီရောင်ပန်းသီးနှစ်လုံး၊ အနက်ရောင်ကော်ဖီတစ်ခွက်;
11: 00 - ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး;
14: 00 - စပျစ်သီးတစ်စည်းနှင့် လိမ္မော်သီးတစ်လုံး၊
17: 00 - သုံးကီဝီ;
20: 00 - ပန်းသီးစိမ်း နှစ်လုံး။
အစားအစာများကြားတွင် လတ်ဆတ်သော သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ဖျော်ရည်များ၊ လက်ဖက်ရည်များ။
ဆန္ဒရှိပါက၊ သင်သည် superfruits မှဖျော်ရည်များ - ဥပမာအားဖြင့် mangosteen၊ acai၊ goji၊ noni တို့ဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။၎င်းသည် သင့်အား စွမ်းအင်နှင့် ဗီတာမင်များကို ပေးလိမ့်မည်။အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရေဖြင့် ရောမွှေရပါမည်။
ပွင့်ချပ် ၆ ပွင့်ကို ၂ ပတ်အကြာတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သည်။
ငွီးငေါ့ငေါ့ငေါ့အစားအစာရှိသော်လည်း, ပန်းပွင့်အစားအစာသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မဖြစ်စေပါဘူး။ငွီးငှေ့သော အစားအသောက်များဖြင့် မကြာခဏ တွေ့ရှိရသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုလည်း မရှိပါ။ခြောက်ရက်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်သည် ဘဝအတွက်လိုအပ်သော ဗီတာမင်များ၊ မိုက်ခရိုဒြပ်စင်များနှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ ပါဝင်သော အသုံးဝင်သော ထုတ်ကုန်များကို အမြဲတစေ ရရှိသည်။တစ်ပတ်လျှင်6ပေါင်ပို၍ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ပွင့်ချပ် ၆ ပွင့်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် မသင့်တော်ပါ။အထူးအစားအစာများနှင့်အတူ မကြာခဏ အပိုင်းပိုင်းခွဲထားသော အစားအစာများသည် အချိန်များစွာယူရသောကြောင့် အားလပ်ရက်တွင် နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ဤစနစ်အရ အာဟာရကို နို့တိုက်မိခင်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ အသည်းရောဂါရှိသူများ၊
ပွင့်လွှာခြောက်ပွင့်စာ စားသောက်နေစဉ်အတွင်း လူများသည် ဆာလောင်မှုကို မခံစားရသောကြောင့် အစားအသောက်ကို ချန်ထားရန် အထူးပြင်ဆင်မှု မလိုအပ်ပါ။အစောပိုင်းကာလများတွင် ကြော်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အဆီများသော အစားအစာများစားခြင်း (သို့မဟုတ် လုံးဝစွန့်လွှတ်ရန်)၊ ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များ၊ အရက်များသောက်ရန် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အပြည့်အဝရရှိမှာလားလို့ စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင် ဗီတာမင်အစုံပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ကောင်းကောင်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်6ပွင့်ချပ်: ရလဒ်များ
ပွင့်ချပ် ၆ လုံးပါတဲ့ အစားအသောက်တွေက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပါဝင်သူဆယ့်ငါးဦး၏ဆန္ဒအလျောက်စမ်းသပ်မှုသင်တန်းကိုကြီးကြပ်သော Dietitians များအသင်းသည် ဤနည်းပညာ၏တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုအပေါ် တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။Johansson ၏ ပွင့်ချပ် ၆ ပွင့် အစားအသောက်ကို လိုက်နာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေး ညွှန်းကိန်းများကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။အဖွဲ့တွင် အများစုပါဝင်သည့် အမျိုးသမီးများသည် တစ်နေ့လျှင် 800 ဂရမ်အထိ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟု ခံစားခဲ့ရသည်။လူတော်တော်များများဟာ အသားအရေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာကာ တက်ကြွလန်းဆန်းပြီး စိတ်ခံစားချက်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွန်းလာကြပါတယ်။
အစားအစာ၏ ပွင့်ချပ် ၆ ပွင့်၏ မီနူးကို ဓာတ်ပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အစားအသောက် ပညာရှင်များထံမှ အသေးစိတ် အကြံပြုချက်များနှင့် ဗီဒီယိုပစ္စည်းများကို လေ့လာရန် အကြံပြုထားသည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက်အစားအသောက် - လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အာဟာရအင်္ဂါရပ်များ
ဂေါက်ရောဂါအတွက် အစားအသောက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် purines ပါသော အစားအစာများကို လျှော့ချရန်နှင့် စားသုံးသည့် အရည်ပမာဏကို တိုးလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာဟာရနှင့်လိုက်လျောညီထွေ၏အင်္ဂါရပ်များ။
14 မတ်လ 2022
ဟာ့ဒ်ဝဲအလေးချိန်ကျခြင်း- ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ
ဟာ့ဒ်ဝဲ အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း နှင့် အလှပြင်ဆိုင်များတွင် သို့မဟုတ် အိမ်၌ မည်သို့ ပြုလုပ်သည်ကို ရှာဖွေပါ။လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်အဆီများကို ဖယ်ရှားရန်၊ သဟဇာတပြန်လည်ရရှိရန်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန် ကူညီပေးသည်။
20 ဒီဇင်ဘာ 2021
တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်ကျနိုင်ပါသလား။
တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့် နည်းလမ်းများ။အမြန်ကိုယ်အလေးချိန်၏အနှစ်သာရ။အကြံပြုချက်များ။တားမြစ်ဆေးများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များ။မီနူးမှ အစားအစာများ ဥပမာများ၊ ဘေးကင်းသော ထွက်ပေါက်များ၊ အစားအသောက်များမပါဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း။
1 နိုဝင်ဘာ 2021
မှာယူရန် KETO Complete 50% အထူးလျှော့စျေး